Nnukwu Azụ Azụ Azụ Azụ Maka Azụmahịa China Manufacturer
Nkọwa:Azụ anụ tankị na-ekpo ọkụ,Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu maka Azụ Azụ,OEM Azụ Azụ Mmiri Ọkụ Mmiri
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > N&#39;okpuru kpo akwa tank > Nnukwu Azụ Azụ Azụ Azụ Maka Azụmahịa
Ihe Nlereanya.: XHC-F034/1
A na-eme ka a na-ekpo ọkụ akuku aquarium a maka ikpo ọkụ tank. N'elu ihe ọkụkụ dị elu nke na-ekpo ọkụ, ihe ntanetị nke kpo oku nwere ike ịchịkwa ike na-akpaghị aka, na-echekwa ọnọdụ okpomọkụ dị na mbara igwe ọbụna oyi oyi nchekwa kachasị na gị na anụ ụlọ gị. Tụkwasị na nke a, ihe onwunwe nke PET ihe ọkụkụ na-eme ka mpe akwa na-agbanwe agbanwe. Anyị na-enye OEM tank tank mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri. Na gị chọrọ, anyị nwere ike ahaziri ngwaahịa ị chọrọ Eji Azụ tank aquarium okpomọkụ anyị na-eme iji hụ CE, RoHS, Ul, ETL ụkpụrụ.
Azụ anụ tankị na-ekpo ọkụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu maka Azụ Azụ OEM Azụ Azụ Mmiri Ọkụ Mmiri Azụ anụ tankị na-ekpo ọkụ na CE Azụ anụ mmiri na-ekpo ọkụ Ọdụ mmiri tankị na-ekpo ọkụ Azụ anụ tankị na Ce Nkịtị na-ekpo ọkụ